Nagu saabsan - Qingdao Yi Xinyan International Trade Co., Ltd.
In kabadan 20 Sano oo Khibrad ah sicirka iyo dufanka
Shining Industry China, waxaan leenahay seddex shirkadood si aan u siino adeegyada ugu fiican.
Waxaan sameynaa oo soo saarnaa oo dufannaa suuqyada gudaha in ka badan 20 sano.
Si aan adduunka ugu keenno badeecado tayo sare leh ayaa ah ujeeddada aan raadineyno. Waxaan aasaasnay ​​shirkad ganacsi oo dhoofisa badeecadaha ugu muhiimsan dufanka iyo qaadista Dekedda Qingdao.
Qingdao YIXINYAN ganacsiga caalamiga co., Ltd astaanta BXY, badeecada ugu muhiimsan waa barkin dhalista boodhka, nooc kale SKYN, sheyga ugu weyni waa dufan dufan leh.Qingdao QINGHENG sita co., Ltd sumadda QHW, sheyga ugu muhiimsan waa kubbadaha kubbadda cagta iyo jihada rullaluistemadka.Qingdao SENZEXIANG international trade co., Ltd astaanta SZX , sheyga ugu weyn waa insulator.
Shirkaddayadu waxay dejisay cilmi baaris iyo horumarin, qaabeyn, wax soo saar ka mid ah shirkadaha teknolojiyadda sare, xoog farsamo oo xoog leh Shirkaddu waxay leedahay qalab baaris gaar ah oo dhammaystiran oo casri ah, mashiinka mashiinka shiidi doona CNC, dhalista saxda ah ee sare ee alaabooyinka oo leh saxnaan sare lehna aasaas adag.
Shirkaddu waxay u hoggaansameysaa tayada xididka, ujeeddo ganacsi oo tayo leh, inta badan macaamiisha cusub iyo kuwii hore si ay u bixiyaan alaab tayo leh, noocyo caan ah si loo abuuro warshad dufan leh oo saliid leh. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweyneynaa ganacsatada gudaha iyo dibada ee ka wada hadlaya iskaashiga iyo horumarka guud.
Waxyaabaha shirkadaydu waxay caan ku yihiin in ka badan 20 Dal, oo ay ku jiraan Yurub, Ameerika, Afrika, Koonfur-bari Aasiya iyo dalal kale.
Hadda wax soo saarka ugu weyn ee warshaddu waa halkii saxda saxda ahayd, rarka culus ee dhoofinta rarka. Warshaddeena ku taal Liao Cheng City, dhammaan tayada sita si adag oo waafaqsan nidaamka tayada nidaamka ISO9001, oo ah mid ka mid ah shirkadda dhoofinta ganacsiga shisheeye ee muhiimka ah. Hadda waxaan ku siin karnaa barkin Block qaadashada, Deep Groove Ball Bearing, Spherical Roller Bearing, Bearing Roller Bearing, Cylindrical Roller Bearing, Thrust Ball Bearing iyo alaabooyin kale oo soo saar iyo codsi ah. Shirkad ganacsi oo ka diiwaangashan "BXY", "FXY", "QHW" "SKYN" qayb ahaan waa la beddelay badeecadaha soo dejinta. Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa mashiinada saxda ah ee sare, makiinadaha birta, dhuxul dhagaxda, wiishka, saliida, dabaysha, baabuurta, waraaqaha iyo warshadaha kale, dhamaan macaamiishayda cusub iyo kuwa duugga ah ee daneynaya wax soo saarkeena.
Wax soo saarka-dufanka
Waxaan sidoo kale la macaamilnaa dhammaan noocyada kala duwan ee ganacsiga dufanka leh sida kaalshiyamka saldhigga ka sameysan, dufanka saliidda ee lithium ee adag, dufanka kuleylka leh ee heerkulka sarreeya iyo wixii la mid ah. Dhamaan kooxdeena, oo heysata koox injineer xirfadeed leh khibrad qani ah oo ku saabsan horumarinta alaabada kiimikada, iskuday inaad hesho mabaadi'da farsamada isku dhaca mashiinka iyo ka shaqeynta horumarka, wax soo saarka, iibinta iyo u adeegsiga alaabada taxanaha dufanka saliida leh, iyadoo ujeedkeedu yahay bixinta macaamiisha wax soo saarka xirfadeed ee saliida iyo xalal nidaamsan iyo adeeg siinta macaamiisha wax kabadan 120 warshadood si ay uga dhigaan qalabka macaamiisha mid aan caqabad badnayn oo saliid badan!
Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Tartan
Waxaan ka weyn nahay 10years sano oo waayo-aragnimo xirfadeed ah soo saare dufanka saliidda.
Waxaan u sameysaneynaa xirmada sidii naqshadeyntaada ama shaybaaradaada si buuxda.
Waxaan haynaa koox cilmi baaris iyo horumarin leh si aan u xallino dhibaatooyinka dufanka.
· Waxaa jira alaab-qeybiyeyaal badan oo alaab-qeybiyeyaal ah oo ku wareegsan warshaddeenna, sannado badan ayaan la shaqeynay.
· Amarada tijaabada yar ayaa la aqbali karaa, muunad bilaash ah ayaa la heli karaa.
Qiimahayagu waa mid macquul ah oo aan ku hayno tayada ugu sareysa macaamiisha kasta.
· Tayo wanaagsan
· Sumcad Wanaagsan
Aqbal Amarka Imtixaanka Yar
Baakadaha Naqshadeynta Bilaashka ah
· Muunad Laheli Karo
Awood cilmi baaris iyo horumar
Adeeg Masuul ah
Awood Wax Soosaar Baaxad Leh
Iskaashiga Muddada Dheer
Waxaan si gaar ah ugu jirnaa ujeedada iskaashiga laba-geesoodka ah, waa xulashada koowaad, inaad adigu xakameyso faa'iidada aan ku adkeyno tayada, waxaan nahay alaab-qeybiyaha aad ku kalsoon tahay, waxaan ku nuuxnuuxsannay adeegga, waa xulashada koowaad ee aad diyaar u tahay iskaashiga muddada-dheer, kooxdayada ayaa leh hamiga ugu sareeya
Kaliya ma nihin bahwadaag ganacsi, waan qadarineynaa la kulanka, sidaa darteed waxaan leenahay masuuliyad ah in aan ilaalino xiriirka wanaagsan.Waxaan ku adkeysaneynaa "Samee ganacsi tayo leh, kala hadal sicirka jilicsan."